Myanmar DRR Homepage	About this Portal Objectives Admin login DRR ပင်မ စာမျက်နှာ	ဤ Portal အကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်များ အက်ဒမင် နေရာ Myanmar DRR Landscape	About Myanmar Hazard Profile of Myanmar National Framework and Institutional Arrangements on DRR Ministries and Departments DRR Working Group UN, INGOs and NGOs Civil Society Forum on DRR မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေး ဆိုင်ရာမြင်ကွင်း	မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးများအကြောင်း ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးအဆင့် မူဘောင်နှင့် အဖွဲ့ အစည်းစနစ် စီစဉ်ထားရှိမှုများ ၀န်ကြီးဌာနနှင့်ဦးစီဌာနများ မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်း အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အရပ်ဘက် လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ဖိုရမ် UN Online Resources	Search Online Resources Documents and Publications Good Practices IEC Materials Meeting Minutes Presentations Maps 3W အင်တာနက်ပေါ်မှ လေ့လာနိုင်သော အကိုးအကားများ	အင်တာနက်ပေါ်မှ လေ့လာနိုင်သော အကိုးအကားများကို ရှာဖွေရန် Search စာရွက်စာတမ်း၊မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့် ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်စာတမ်းများ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ နမူနာကောင်းများ အသိပညာ အထောက်အကူပြု စာစောင်ပစ္စည်းများ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ မြေပုံများ 3W DRR Projects in Myanmar	DRR Events & Trainings	DRR Agencies & Network	Links	click Here to download DRR Working Group Registration Form
Myanmar DRR Working Group Information Portal isaone-stop online platform for Disaster Risk Reduction [DRR] information related to Myanmar. The objective of the Portal is to provide overview of DRR in Myanmar, promote exchange of information and to serve as repository of documents. In partnership with the MIMU, the Technical Working Group of the DRR Working Group, Myanmar maintains the Portal. The Portal has been jointly developed in wider-consultative mode by Malteser International and ADPC in partnership with the DRR Working Group and with funding support from the ECHO. more...
မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ (Disaster Risk Reduction Working Group, Myanmar) ၏ သတင်းအချက်အလက် Portal အကြောင်း
Portal သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေး (DRR) ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုံစုံလင်လင်လေ့လာသိ ရှိနိုင်သော နေရာဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသော သဘာဝဘေးများအကြောင်း ၊ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီစဉ်ထားရှိမှုများ ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေး (DRR) ဆိုင် ရာဆောင်ရွက်မှုများကိုခြုံငုံ၍ သိရှိစေရန်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများက မည်သည့် နေရာတွင် မည်သည့် DRR လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်နေ သည်စသည့် သတင်း အချက်အလက် ဖလှယ်မှုများကို ပို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေး (DRR) ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် နမူနာကောင်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ This website is best viewed with Fire Fox/ IE7/IE8/. Please click HERE to download Myanmar font. Home | Terms & Conditions | Contact Us | About Us |